वकिलले किन लगाउँछन कालो कोट, यस्तो रोचक छ कारण — Sanchar Kendra
वकिलले किन लगाउँछन कालो कोट, यस्तो रोचक छ कारण
अक्सर तपाईंले फिल्म वा प्रत्यक्ष पनि वकिलले कालो कोट र सेता सर्ट लगाएको देख्नु भएको होला । तर सायद तपाईंलाई किन वकिलले कालो कोट लगाउँछन् भन्नेबारे थाहा छ ? किन उनीहरु अन्य कुनै रंगको कोट लगाउदैनन् ?
वकिलले कालो कोट लगाउनु कुनै फेसन होइन । यसको पछाडी रोचक कारण छ । खासमा सन् १३२७ मा एडवर्ड तृतीयले वकालतको शुरुवात गरेका थिए । त्यस समय वकालतका लागी ड्रेस कोडका आधारमा न्यायाधिशको भेषभुषा तयार पारियो । न्यायाधिशलाई शिरमा कपालको एक बिग लगाउने चलन चलाइयो ।
वकालत शुरुवात गर्दाताका वकिललाई ४ भागमा विभाजित गरिएको थियो । जसमा स्टुडेन्ट, प्लीडर, बेञ्चर र बैरिस्टर थियो । यी सबैले न्यायाधिशको स्वागत गर्दथे । त्यस समय अदालतमा सुनौलो रातो कपडा र खैरो रंगको गाउन लगाइन्थ्यो । तर पछि सन् १६०० मा वकिलको भेषभुषामा परीवर्तन गरियो । तर यो लामो चलेन ।
पछि सन् १६३७ मा वकिलले पनि जनताको जस्तै पहिरन लगाउनु पर्ने नियम बनाइयो । यस नियममा वकिलले लामो गाउन लगाउन शुरु गरे । यसले न्यायाधिश र वकिललाई अरु भन्दा फरक देखाउथ्यो ।
पछि सन् १६९४ मा बेलायतकी महारानी क्वीन मैरीको मृत्यु भयो । यसै क्रममा उनका पती राजा विलियम्सले सबै न्यायधीश र वकिललाई सार्वजनिक रुपमा शोक मनाउन कालो पहिरनमा आउने आदेश दिए ।
यसपछि वकिलले कालो कोट लगाउन थाले । यो नियम कसैले बनाएर वा गर्नैपर्छ भनेर भनिएको होइन । त्यसपछि वकिलले यहि पहिरनलाई लगाउन थालेपछि कालो कोट लगाउने प्रथा बस्यो ।
आजकल कालो कोट वकिलको पहिचान बनको छ । यसैलाई पछि हरेक देशमा नियम झै बनाइयो । कालो कोट, सेतो सर्टमा वकिल अनुशाशित देखिने र न्याय प्रति विश्वास गरिने मान्यता छ ।